Ngaba iiNjini zokuKhangela zifumana njani, ziKhasa, kunye neKhonkco kuMxholo wakho? | Martech Zone
Ngaba iiNjini zokuKhangela zifumana njani, ziKhasa, kunye neKhonkco kuMxholo wakho?
Andihlali ndicebisa ukuba abathengi bazakhele ezabo i-ecommerce okanye iinkqubo zolawulo lomxholo ngenxa yazo zonke iindlela ezingabonakaliyo zokukhulisa ezifunekayo kule mihla-ikakhulu zijolise kukukhangela kunye nokwenza intlalontle. Ndabhala inqaku nge uyikhetha njani i-CMS Kwaye ndisayibonisa iinkampani endisebenza nazo ezilingwayo ukuba zenze eyazo inkqubo yolawulo lomxholo.
Nangona kunjalo, kukho iimeko ezizodwa apho iqonga lesiko liyimfuneko. Xa eso isisombululo esifanelekileyo, ndisatyhala abathengi bam ukuba benze izinto eziyimfuneko ukuze bandise iisayithi zabo zokukhangela kunye nemithombo yeendaba zentlalo, nangona kunjalo. Kukho izinto ezintathu eziphambili eziyimfuneko.
Yintoni iFayile yeRobots.txt?
robots.txt ifayile - ifayile ye- iirobhothi.txt ifayile yifayile yokubhaliweyo ecacileyo ekwingcambu yolawulo lwesiza kwaye ixelela iinjini zokukhangela ukuba mazibandakanye ntoni kwaye zingabandakanyi kwiziphumo zophando. Kwiminyaka yakutshanje, iinjinjini zokukhangela zikwacelile ukuba ubandakanye umendo oya kwimephu yesiza yeXML ngaphakathi kwifayile. Nanku umzekelo wam, ovumela zonke i-bots ukuba zirhubuluze kwindawo yam kwaye zibalathise nakwimephu yam yeXML:
Yintoni imephu yendawo yeXML?
eKhaya XML Kanye njengokuba i-HTML ijonge kwisikhangeli, iXML ibhaliwe ukuba yetyiswe ngokwenkqubo. Imephu yesayithi yeXML ngokusisiseko itafile yamaphepha onke kwindawo yakho kwaye yagqityelwa nini ukuhlaziywa. Imephu zesiza zeXML zinokubotshelelwa ngamatyathanga emxholweni… leyo yenye yemephu yesayithi yeXML inokubhekisa kwenye. Kulungile ukuba ufuna ukucwangcisa nokwaphula izinto ezikwisiza sakho ngokufanelekileyo (ii-FAQs, amaphepha, iimveliso, njl.njl.
I-Sitemaps zibalulekile ukuze ukwazi ukwenza ukuba iinjini zokukhangela zazi ukuba yeyiphi imixholo oyenzileyo kwaye yagqitywa nini ukulungiswa. Inkqubo yokusetyenziswa kweinjini yokukhangela xa usiya kwindawo yakho ayisebenzi ngaphandle kokwenza imephu yendawo kunye neziqwengana.
Ngaphandle kwemephu yendawo yeXML, ubeka emngciphekweni amaphepha akho ukuba angaze afunyanwe. Kuthekani ukuba unemveliso iphepha elitsha lokufika elinganxibelelananga ngaphakathi okanye ngaphandle. UGoogle uyifumana njani? Ewe, beka ngokulula… kude kufumaneke ikhonkco kuyo, awuzukufunyanwa. Ngombulelo, iinjini zokukhangela zenza ukuba iinkqubo zolawulo lomxholo kunye neqonga le-ecommerce likhuphe ikhaphethi ebomvu kubo, nangona!
UGoogle ufumanisa ikhonkco elingaphandle okanye langaphakathi kwindawo yakho.
UGoogle wenza isalathiso sephepha aze alilinganise ngokomxholo wayo kunye nokuba yintoni umxholo kunye nomgangatho wesiza sokudibanisa.
Ngemephu yesayithi yeXML, awushiye ukufunyanwa komxholo wakho okanye uhlaziyo lomxholo wakho ube lithuba! Uninzi lwabaphuhlisi bazama ukuthatha iindlela ezimfutshane ezibenzakalisa nazo. Bapapasha i-snippet efanayo etyebileyo kuyo yonke indawo, ukubonelela ngolwazi olungahambelaniyo nolwazi lwephepha. Bapapasha imephu yesayithi enemihla efanayo kwiphepha ngalinye (okanye zonke zihlaziywa xa iphepha elinye lihlaziya), zinika imigca kwiinjini zokukhangela ukuba zidlala inkqubo okanye azithembekanga. Okanye abazikhangeli iinjini zokukhangela konke konke… ngenxa yoko injini yokukhangela ayiqondi ukuba ulwazi olutsha lushicilelwe.
Yintoni iMetadata? IMicrodata? Iziqwenga ezityebileyo?
Izityebi ezithengiweyo ziphawulwe ngononophelo kwimicodata efihliweyo kumbukeli kodwa ibonakala ephepheni kwiinjini zokukhangela okanye kwiisayithi zemithombo yeendaba ukuze zisetyenziswe. Oku kwaziwa ngokuba yimethadatha. UGoogle uhambelana ne Schema.org njengomgangatho wokubandakanya izinto ezinjengemifanekiso, izihloko, iinkcazo… kunye nentaphane yezinye iziqwengana ezinolwazi ezinje ngexabiso, ubungakanani, ulwazi lwendawo, ukulinganiswa, njl.njl. I-Schema iya kukhulisa ngokubonakalayo ukubonakala kweinjini yokukhangela kunye namathuba okuba umsebenzisi acofe ukugqitha.
I-Facebook isebenzisa iifayile ze I-OpenGraph umthetho olandelwayo (ngokuqinisekileyo abanakufana), i-Twitter ine-snippet yokuchaza iprofayili yakho ye-Twitter. Ngaphezulu nangakumbi amaqonga asebenzisa le metadata ukujonga kwangaphambili amakhonkco afakelweyo kunye nolunye ulwazi xa bepapasha.
Amaphepha akho ewebhu anentsingiselo eqondwa ngabantu xa befunda amaphepha ewebhu. Kodwa iinjini zokukhangela zinokuqonda okulinganiselweyo kwinto ekuxoxwa ngayo kula maphepha. Ngokudibanisa iithegi ezongezelelweyo kwi-HTML yamaphepha akho ewebhu-iithegi ezithi, "Hei injini yokukhangela, olu lwazi luchaza le movie, okanye indawo, okanye umntu, okanye ividiyo" -unokunceda iinjini zokukhangela kunye nezinye iinkqubo ziqonde umxholo wakho kwaye uyibonise ngendlela efanelekileyo, efanelekileyo. IMicrodata siseti yeethegi, ezaziswa nge-HTML5, ekuvumela ukuba wenze oku.
Schema.org, Yintoni iMicrosoftData?
Ewe, akukho nanye kwezi ifunekayo… kodwa ndiyabacebisa kakhulu. Xa usabelana ngekhonkco kuFacebook, umzekelo, kwaye akukho mfanekiso, isihloko, okanye inkcazo eza… bambalwa abantu abaya kuba nomdla kwaye bacofe nje. Kwaye ukuba ii-Schema snippets azikho kwiphepha ngalinye, kunjalo ungabonakala kwiziphumo zokukhangela… kodwa abo bakhuphisana nabo banokukubetha xa benolwazi olongezelelekileyo olubonisiweyo.
Bhalisa iimephu zakho zeSitampu zeXML ngeConsole yokuKhangela
Kunyanzelekile ukuba, ukuba wakhe owakho umxholo okanye iqonga le-ecommerce, ukuba unenkqubo esezantsi ecofa iinjini zokukhangela, epapasha imicroodata, kwaye emva koko ibonelele ngemephu yesiza yeXML esemthethweni yomxholo okanye ulwazi ngemveliso olufumanekayo!
Nje ukuba ifayile yakho yeerobhothi.txt, iimephu zesayithi zeXML, kunye neziqwengana ezityebileyo zilungelelaniswe kwindawo yakho yonke, ungalibali ukubhalisa kwiinjini yokukhangela nganye kwiConsole yokuKhangela (ekwabizwa ngokuba sisixhobo seWebmaster) apho unokujonga khona impilo nokubonakala kwakho indawo kwiinjini zokukhangela. Ungayichaza indlela yakho yemephu ukuba akukho namnye udwelisiweyo kwaye ubone ukuba injini yokukhangela iyidla njani, nokuba akukho micimbi ikhona, nokuba ungazilungisa njani.
Ukukhupha ikhaphethi ebomvu kwiinjini zokukhangela nakwimithombo yeendaba kwezentlalo kwaye uya kuyifumana indawo yakho ekumgangatho ongcono, ungeniso lwakho kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela ucofe ngaphezulu, kwaye amaphepha akho abiwe kakhulu kwimidiya yoluntu. Konke kudibanisa!
Isebenza njani iRobots.txt, i-Sitemaps, kunye neMetaData
Ukudibanisa zonke ezi zinto kufana nokuhambisa ikhaphethi ebomvu kwindawo yakho. Nantsi inkqubo yokurhubuluza ehamba ne-bot kunye nendlela injini yokukhangela ebonisa ngayo umxholo wakho.
Indawo yakho inefayile yeerobhothi.txt ekwangqinisisa indawo yakho yeXML Sitemap.
Inkqubo yakho ye-CMS okanye ye-ecommerce ihlaziya i-Sitemap yeXML ngalo naliphi na iphepha kwaye upapashe umhla okanye uhlele ulwazi lomhla.
Inkqubo yakho ye-CMS okanye ye-ecommerce icofa iinjini zokukhangela ukuze zibazise ukuba indawo yakho ihlaziyiwe. Ungabacofa ngokuthe ngqo okanye usebenzise i-RPC kunye nenkonzo efana nayo IPing-o-matic Ukutyhala kuzo zonke iinjini eziphambili.
Injini yokukhangela ibuyela kwangoko, ihloniphe ifayile yeRobots.txt, ifumana amaphepha amatsha okanye ahlaziyiweyo ngemephu yesayithi, emva koko isalathise iphepha.
Xa isalathisa iphepha lakho, lisebenzisa i-snippet microdata etyebileyo ukuphucula iphepha lesiphumo seinjini yokukhangela.
Njengoko ezinye iisayithi ezifanelekileyo zinxibelelana nomxholo wakho, umxholo wakho ungcono.
Njengokuba umxholo wakho kwabelwane ngawo kwimidiya yoluntu, ulwazi olucekeceke lwentetho oluchaziweyo lunokunceda ukujonga kwangaphambili umxholo wakho kwaye ubalathise kwiprofayile yakho yentlalo.
tags: isiko ecommercekwenziwa kanjaniprotocolIfayile yeerobhothi.txtschemekhangela ikhonsoliindawo yemephu esemgangathwenixml imephu yendawo
Nov 3, 2020 ngo-3:47 AM
Iwebhusayithi yam ayikwazi ukwenza isalathiso somxholo omtsha, ndilanda imephu yesayithi kunye nee-urls kwi-webmaster kodwa andikwazi ukuphucula oku. Ngaba yingxaki ye-backend kagoogle?
Nov 3, 2020 ngo-7:50 AM
Ayiqhelekanga, ithini indawo yakho? Ndinezixhobo endinokuhlalutya ngazo indawo yakho.